Wednesday January 15, 2020 - 20:40:00 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Warar dheeraad ah ayaa kasoo baxaya dil wadareed uu maamulka isku magacaabay 'Somaliland' ka geystay deegaan katirsan gobolka Waqooyi Galbeed Soomaaliya.
laba kamid ah maxaabiistii maanta latoogtay
Wararka ka imaanaya deegaanka Mandheera ee udhaxeeya magaalooyinka Hargeysa iyo Berbera ayaa sheegaya in maanta halkaas lagu dilay illaa 6 qof oo dhammaantood ahaa maxaabiis muddo sanada ah ku xirnaa xabsiyada uu gacanta ku hayo maamulka isku magacaabay 'Somaliland'.
Dadka ladilay laba kamid ah ayuu maamulka Muuse Biixi ku eedeeyay in ay katirsanaayeen Xarakada Shabaabul Mujaahidiin, ehellada dadka lalaayay oo warbaahinta lahadlay ayaa sheegay in wixii maanta dhacay ay ahaayeen fal dambiyeed uu galay maamulka ka jira magaalada Hargeysa.
Dadka xukunnada dilka ah lagu fuliyay ayaa 10-kii sanadood ee lasoo dhaafay ku xirnaa xabsiyo kuyaal magaalooyinka Hargeysa iyo Mandheera waxayna magacyadoodu kala ahaayeen.
1- Farxaam Maxamed Xasan ( Buuhoodle )
2- Cabdillaahi Ismaaciil Xayd ( Burco)
3- Axmed-Guray Ibraahin Faarax ( Burco)
4-Khadar Aleel ( Gabiley )
5- Xasan Muxumed Cismaan ( Hargeysa )
6- Caydaruus Khadar Haybe ( Hargeysa ).
Xalay saqdii dhexe ayaa Xabsiga weyn ee magaalada Hargeysa lagala baxay laba maxbuus oo lagu kala magacaabi jiray Farxaan iyo Axmed, halka afar kale oo maxaabiis ahaa iyana lagala baxay Xabsiga Mandheera.
War kooban oo kasoo baxay maamulka isku magacaabay 'Somaliland' ayuu ku sheegay in dilkii ay maanta fuliyeen uu ahaa Qisaas sida ay hadalka udhigeen, maxaabiista lagummaaday ayaa ahaa kuwa aan waxba galabsan waxaana falkaan si aad ay udhaleeceeyay qeybaha kala duwan ee bulshada.